Weather in Thailand tamin'ny Janoary ~ Journey-Assist - Fanavakavahana. Hanao inona
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Janoary
Weather in Thailand tamin'ny Janoary
Ny fiandohan'ny taona dia mety amin'ny fandehanana any amin'ny Fanjakan'i Thailand. Ny tombony amin'ny toetrandro mandritra io vanim-potoana io: toetrandro mafana sy maina, lanitra feno rahona sy ranomasina tony. Ny hany tokana dia ny faritany atsimo sy ny nosy Andaman, izay misy ny orana maivana indraindray. Tamin'ny volana Janoary, rivotra maina avaratra atsinanan'ny avaratra no mibahana ao amin'ny firenena. Amin ny faritra rehetra dia mafana ny hafanana ny rivotra sy ny rano amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina sy ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana.
Inona no tokony hatao any Thailandy ny volana janoary
Amin'ny faritany avaratra any Thailand amin'ny fiandohan'ny taona dia mafana be: manomboka amin'ny +24 ka hatramin'ny +27 degre. Amin'ny alina, ny mari-pana amin'ny rivotra dia mihena 4-5 degre fotsiny. Any amin'ireo faritra be tendrombohitra dia mety mangatsiatsiaka, miankina amin'ny haavon'ny rano, miloka amin'ny +18 degre ny rivotra mandritra ny andro. Hisy orana. Matetika izy ireo amin'ny alina.
Any an-dRenivohitra sy ao amin'ny faritra afovoany, ny vinan'ny toetrandro dia mampanantena toetrandro mafana sy maina. Ny haavon'ny hamandoana dia ambany, tsy mihoatra ny 50%. Ny mari-pana amin'ny andro dia mitombo hatramin'ny +29 degre, mangatsiaka kokoa ny hariva, eo amin'ny +25 degre. Any ivelan'ny morontsirak'i Pattaya sy Hua Hin, ny ranomasina dia mitombo hatrany amin'ny +26 degre.
Ny akaikin'ny atsimo, miha mafana ny toetr'andro. Ao amin'ny nosy Phuket, any amin'ny faritanin'i Krabi sy ny nosy Lanta, ny rivotra dia mahatratra hatramin'ny +32 degre mandritra ny andro, ary ny haavon'ny ranomasina dia mahatratra +28 degre. Ny orana any amin'ny faritra atsimo dia tena tsy fahita firy, ary amin'ny tolakandro. Mikasika ny morontsiraka amoron-dranomasina sy any amin'ny nosy Andaman, ny haavon'ny hamandoana dia mahatratra 75%, na izany aza, ny fehezin'ny toetr'andro dia mora raisina amin'ny alàlan'ny rivotra mahery. Mikasika ny morontsiraka any an-tampon-tanànan'i Thailand tamin'ny volana janoary, dia oram-be kosa ny orana, tokony ho 5-6 andro isam-bolana, ary mihoatra ny 50% ny mety hisian'ny rivo-doza. Mifono rahona ny lanitra. Ny mari-pana ny rano ao amin'ny bay dia +27 degre.
Endrika fitsaharana amin'ny Janoary
Toerana mamy sy maina any amin'ny ankamaroan'ny firenena dia mamela ny mpizahatany hitafy akanjo maivana, izay amin'ny vidiny mora dia azo vidina eny an-tsena sy ny toeram-pivarotana any Thailand. Ny mpizahatany za-draharaha dia manoro hevitra ny tsy hameno ny valizinao raha mandeha fialan-tsasatra mankany amin'ny Fanjakana ianao. Betsaka ny akanjo sy ny kojakoja tsy hamela tsy hanelingelina na dia mpivahiny aza, misy risika lehibe miverina mody miaraka amin'ny kitapo fanampiny miaraka amin'ny fividianana.
Mandritra ny fialan-tsasatra any Thailand ao amin'ny Janoary, mila mandeha amin'ny fitsangatsanganana mahafinaritra ianao izay afaka mamela fahatsapana maharitra! Inona no mendrika hialana amin'ny elefanta, fitsangatsanganana amin'ny toerana arovana any amin'ny faritr'i Chiang Mai na manao kayak any amin'ireo nosy.
Tamin'ny afovoan'ny ririnina, mpizahatany an'arivony maro manerana izao tontolo izao no tonga eto amin'ny firenena, izay ahitana takelaka mandritra ny alina am-polony sy fampisehoana ary fialamboly hafa any amin'ny toerana malaza indrindra. Ny vidiny dia mahasarika kokoa.
Ny fitsangatsanganana an-tsambo sy ny sambo manerana ny nosy Andaman no tena be mpitia. Ny sasany amin'izy ireo dia maharitra adin'ny ora vitsivitsy, mihoatra ny adiny 6. Mandritra io dia io, ny mpizahatany dia mankafy ny zava-kanto mahafinaritra sy ny fanamaivanana ny hantsam-bato an-tendrony, milomano ao anaty ranomasina ary mifankahita amin'ny endri-tsakafo Thai.
Aiza ny tsara kokoa ny miala sasatra any Thailandy janoary?
24.0 ° C
1 andro (10.8 mm.)
9 andro (124.6 mm.)
1 andro (15.9 mm.)
8 andro (179.3 mm.)
3 andro (36.7 mm.)
9 andro (124.5 mm.)
9 andro (112.9 mm.)
4 andro (56.6 mm.)
3 andro (39.0 mm.)
3 andro (37.3 mm.)
7 andro (121.6 mm.)
9 andro (133.1 mm.)
4 andro (55.9 mm.)
2 andro (29.4 mm.)
8 andro (166.2 mm.)
3 andro (47.8 mm.)
11 andro (157.9 mm.)
8 andro (178.4 mm.)
8 andro (178.2 mm.)
9 andro (124.9 mm.)
9 andro (124.8 mm.)
11 andro (209.8 mm.)
8 andro (164.1 mm.)
9 andro (125.0 mm.)
7 andro (119.2 mm.)
1 andro (44.6 mm.)
8 andro (172.2 mm.)
8 andro (124.5 mm.)
9 andro (122.5 mm.)
2 andro (29.5 mm.)
7 andro (180.9 mm.)
9 andro (113.3 mm.)
6 andro (118.6 mm.)
9 andro (125.4 mm.)
8 andro (178.3 mm.)
3 andro (47.9 mm.)
5 andro (83.6 mm.)
1 andro (23.3 mm.)
1 andro (30.1 mm.)
8 andro (177.9 mm.)
3 andro (105.4 mm.)